डा. गोविन्द केसी | Ratopati
‘प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको हस्तक्षेप भयो, डा. केसीलाई जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्छ’ access_timeअसोज २४, २०७७
मेडिकल शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राख्दै डा. गोविन्द केसी आमरण अनसनमा बसेको २७ दिन पुगेको छ । यो बीचमा सरकारी पक्ष र डा.केसी पक्षबीच दुई चरणमा वार्ता भएपनि निस्कर्ष निस्किएको छैन । शनिवार सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गररी उनलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ र उनले रा...
डा. केसीसँग वार्ताका लागि चौतर्फी दबाब, सरकार अझै मौनता साँध्दै access_timeअसोज २०, २०७७
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि तत्काल वार्ता गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, साझा पार्टी तथा नागरिक समाजका विभिन्न तह र तप्काले वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्दै उनको जीनवरक्षाका ...
डा. केसीसँग वार्ता गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम access_timeअसोज १९, २०७७
काठमाडौं – नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्न सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। डा. केसी अनशन बसेको २१ दिन पुगे पनि सरकारले बेवास्ता गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ। संघका महासचिव डा...
डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा गर्न समाजवादी विद्यार्थी युनियनको माग access_timeअसोज १३, २०७७
काठमाडौं । समाजवादी विद्यार्थी युनियनले डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको लागि सरकारसँग माग गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएका केसीको जीवनरक्षाको माग गरेका हुन् । ‘कुशासन र भ्रष्टाचारल...
डा.गोविन्द केसीलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजाने पहल विफल, सर्वपक्षीय बैठकमा जुटेन सहमति access_timeकात्तिक २५, २०७६
काठमाडौं– विगत ८ दिनदेखि डडेल्धुरामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले गरेको पहल विफल भएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै पहलमा बोलाइएको सर्वपक्षीय बैठकले ‘डा. केसीलाई इच्छाविपरीत लान मिल्...
सरकारलाई डा. गोविन्द केसीको १४ दिने अल्टिमेटम access_timeअसोज १९, २०७६
काठमाडौं – डा. गोविन्द केसीले विभिन्न ७ बुँदे माग राख्दै फेरि सरकारलाई पुनः सत्याग्रहको १४ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले दुई साताभित्र आफ्नो माग सम्वोधन नभए पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिएका हुन् । ...
डा. केसीको ७ बुँदे माग : प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्चदेखि द्वन्द्वकालिन मुद्दासम्म access_timeभदौ २९, २०७६
काठमाडौँ । डा. गोविन्द केसीले ७ बुदे मागलाई अघि सार्दै अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । आज प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्रीले विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्च र यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारसँग अघिल्लो पटक भएका सम्झौता अनुस...